February 1, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
မမေလေုပျပွတဲ့မကျြနှာအမူအရာပုံစံအတိုငျး လိုကျလုပျပွပွီး အရမျးခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ Liamလေး
Liamကတော့ မကျြနှာမွငျခဈြခငျပါစေ ဆိုတဲ့ဆုနဲ့ပွညျ့စုံတာကွောငျ့ Liamလေးကိုခဈြခငျကွတဲ့ပရိသတျတှကေအမြားအပွားရှိပါတယျနျော။ပရိသတျတှကေတော့ Liamလေးကို ဖိုးဖိုးလှငျမိုးနဲ့တူတယျလို့မှတျခကျြပေးကွကာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့အရှယျရောကျလာတဲ့ Liamလေးကို စောငျ့ကွညျ့ပွီးအရမျးခဈြနကွေတာဖွဈပါတယျ။ ဖှားဖှားမသေူနဲ့ဖိုးဖိုးလှငျမိုးတို့ကလညျး မွေးလေးကို ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ကွီးပွငျးလာအောငျ သခြောဂရုစိုကျစောငျ့ရှောကျပေးကွတာပါနျော။လတျတလောမှာဆိုရငျတော့ ယှနျးဝတီလှငျမိုးတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျလညျး ကြောငျးခဏပိတျလို့ ပွနျလညျရောကျရှိနကွေပွီး သားသားလေးကိုလညျး နှေးထှေးတဲ့မိဘမတ်ေတာတှပေေးနကွေတာဖွဈပါတယျ။ယှနျးဝတီလှငျမိုးက သားသားကိုလညျး အခြိနျပေးပွီး အတူတူဆော့ကစားပေးသလို အနုပညာအလုပျတှကေို တတျနိုငျသလောကျလေးလုပျဆောငျနတောပါနျော။ Liamလေးကလညျး တဈနတေ့ဈခွားပိုပိုခဈြဖို့ကောငျးလာပွီး စကားတှလေညျးတီတီတာတာပွောတတျကာ သီခငျြးတှလေညျးဆိုတတျနပေါပွီနျော။အခုဆိုရငျလညျး Liamလေးက မမေနေဲ့အတူကစားနပွေီး မမေမေ့ကျြနှာအမူအရာပုံစံအတိုငျး လိုကျလုပျနတောဖွဈပါတယျ။ယှနျးဝတီလှငျမိုးကတော့ အရမျးဉာဏျကောငျးတဲ့သားသားလေးကို ခဈြမဝဖွဈနပွေီး သားအမိနှဈယောကျအတူတူကစားနကွေတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါရစနေျော။
အလုပျနှငျ့ထောငျဒဏျ ၇ နှဈကခြံနရေတဲ့ အဆိုတျော အစ်စဏီအတှကျ ဂီတညီအဈကိုမောငျနှမတှေ စုပေါငျးပွီး အယူခံဝငျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ ညီအဈကိုလို ခဈြတဲ့စိတျကွောငျ့ လူမှုရေးအရ အခုလို ဆောငျရှကျတာလို့လညျး သူကပွောပါတယျ။ ရညျးစားဟောငျးကို အဓမ်မကငျြ့ နှိပျစကျမှုနဲ့ တရားစှဲဆို ခံထားရတဲ့ အဆိုတျော အစ်စဏီကို တာမှတေရားရုံးကနေ ဒီဇငျဘာ၇ရကျနကေ့ တာမှမွေို့နယျ တရားရုံး မှာ ထောငျဒဏျ(၇)နှဈ ခမြှတျလိုကျကွောငျး သိရပါတယျ။ ဒီ ပွဈဒဏျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဂီတအနုပညာရှငျတှေ စုပေါငျးကာ အယူခံဝငျသှားမယျလို့ ဂီတမှူး နိုငျဇျောက ပွောပါတယျ။ “တေးသံရှငျအစ်စဏီ၏အယူခံကိုမကွားနာမှီအခြိနျအတှငျးဂီတအနုပညာရှငျညီအကိုမောငျနှမမြား၏အကူအညီလိုအပျနပေါသဖွငျ့ပါဝငျကူညီလိုသောအနုပညာရှငျမြားကိုဖိတျချေါအပျပါသညျ။ Read more
အိန်ဒွာကြျောဇငျဟာ နောကျထပျရိုကျကူးမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားသဈကွီးအတှကျ မွနျမာအကကို ကွိုးကွိုးစားစား လလေ့ာသငျယူနတောတှရေ့ပါတယျ။ ဘယျလိုကာရိုကျတာမဆို အကောငျးဆုံး ကွိုးစားတတျတဲ့ သရုပျဆောငျ တဈယောကျပါပဲ။ ပရိသတျအခဈြတျော မငျးသမီးခြော အိန်ဒွာကြျောဇငျကတော့ မွနျမာအကကို အားကွိုးမာနျတကျ သငျကွားနတော တှရေ့ပါတယျ။ မကွာခငျရိုကျကူးမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျနတောပါတဲ့။ “2020 ထဲမှာ တဈကားတော့ရိုကျလို့ပွီးသှားပွီ။ ကဲ…ခု..နောကျတဈကားအတှကျ… လာလရေော့… မွနျမာအက….တဈနတေ့ဈနအေ့က ကငျြ့ရတာနာလိုကျတဲ့ကိုယျတှလေကျတှေ မွနျမာအက ကနိုငျတဲ့ သူတှကေိုအရမျးလေးစားတယျ။ တကယျတနျဖိုးရှိတဲ့ မွနျမာအက။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကွညျ့ရတာတော့ ဗြိုငျးကွီးပြံနသေလိုပါလား မမအှဲရယျ” ဆိုပွီးတော့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ Read more
ဒီအချက်(၈) ချက်ကို လုပ်မိရင် သင့်ရဲ့Facebook အကောင့် အပိတ်ခံရနိုင်
ဖေ့စ်ဘုခ်နေ့တိုင်း အသုံးပြုနေကြတာမို့ ဝက်ဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တားမြစ်ထားတဲ့ အရာတွေ(ဥပမာ – nudity or violence )အပြင် အခြားသော စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချို.ကို ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ တားမြစ်ထားပါသေးတယ် ဘာတွေဖြစ်မလဲ သိထားသင့်ပါတယ်။ 1. Poor Parenting သင့်အနေနဲ့ သင့်သားငယ် အရက်ဘီယာ သောက်နေတာကို လူတကာမြင်စေဖို့ ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ တင်ခဲ့ရင် သင့်အကောင့်ကို facebook က ပိတ်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သင့်ရဲ. ဒီအပြုအမူဟာ ကလေးငယ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မသင့်တော်တဲ့ အပြုအမူကို သင်ပြုမိလို့ပါပဲ။ Read more
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီးလေး ပေါက်လို့ ချိမ့်ကေကိုနဲ့ အချစ် ခရီးထွက်မဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ကျော်ကျော်နဒ္ဒ
ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီးလေး ပေါက်လို့ ချိမ့်ကေကိုနဲ့ အချစ် ခရီးထွက်မဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ကျော်ကျော်နဒ္ဒ ကအရမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပါတယ် ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ ပျေည်ရွှင်စရာခရီးလေးဖြစ်ပါစေနော် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီးလေး ပေါက်လို့ ချိမ့်ကေကိုနဲ့ အချစ် ခရီးထွက်မဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ကျော်ကျော်နဒ္ဒ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီးလေး ပေါက်လို့ ချိမ့်ကေကိုနဲ့ အချစ် ခရီးထွက်မဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ကျော်ကျော်နဒ္ဒ ကအရမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပါတယ် ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ ပျေည်ရွှင်စရာခရီးလေးဖြစ်ပါစေနော် ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ထိုးခဲ့တဲ့ ထီးလေး ပေါက်လို့ ချိမ့်ကေကိုနဲ့ အချစ် ခရီးထွက်မဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် ကျော်ကျော်နဒ္ဒ ကအရမ်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပါတယ် ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ Read more
ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုပဲ ပင်စင်ရတဲ့ထိလုပ်ကိုင်သွားမယ့် သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုရှင် ဇနီးမောင်နှံ
ဠ- ၈၅၇၅၂၀ နံပတ်နဲ့ ဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ။ကျုံပျော်မြို့ ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာ အလက(ခွဲ)မှာ KGတန်းပြ ဆရာမတစ်ဦးမိသားစုက ကျုံပျော်မြို့ မြန်ပြည်ချမ်းသာထီဆိုင်ကြီးကနေ ကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးရောင်းတဲ့ သူဆီက (၃)စောင်တွဲထီကံစမ်းရင်း အခုလိုကံထူးခဲ့တာပါ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ(၁)ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိတဲ့ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးရဲ့ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်မြို့နယ် ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးရဲ့ မိသားစုက ဆွတ်ခူးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကံထူးနံပတ် ဠ-၈၅၇၅၂၀ နံပတ်နဲ့ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုဇော်မင်းထွန်း + ဆရာမဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း မိသားစုတို့က ကံထူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း က ဆင်နှစ်ကောင်ကျေးရွာက အလက(ခွဲ)မှာ Read more
ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသိအမြင်အရအရက်သောက်ခြင်းဟာကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့လူကြီးသူမတွေရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှု့အရနားလည်ခဲ့ကျရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကမိရိုးဖလာသွန်သင်မှု့တွေကလက်တွေ့လောကမှာအသုံးမ၀င်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သွန်သင်ပြတဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ကလည်းဆိုးကျိုးဘာကြောင့်ဆိုတာကိုသွန်သင်မှု့အားနည်းကျပြီးလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအနေနဲ့သာသင်ပြပေးခဲ့ကျပါတယ်။ အစောကပြောသလိုအရက်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပဲသွန်သင်မှု့ကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်အရက်မှာကောင်းကျိုးဆိုတာရှိသေးကြောင်းမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမည်သည့်အရာမဆို တန်ဆေးလွန်ဘေး ရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုသင့်ပါကြောင်း…. အရက်၏ကောင်းကျိုးများ… ၁။ ။Teqilaဆိုတဲ့အရက်ကတော့ နာကျင်မှု့ဝေဒနာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆထိခိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နေမကောင်းဖြစ်ချင်နေလို့အသားတွေနာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်Teqilaဆိုတဲ့အရက်ကတော့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ။Meadဆိုတဲ့အရက်ကတော့ခန္ဒာကိုယ်ထဲကအဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ၃။ ။Whiskeyဆိုတဲ့အရက်အမျိုးအစားကတော့လေဖြတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။လေဖြတ်ဝေဒနာကိုမခံစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဝီစကီကိုများများသောက်ပါ။(မြန်မြန်တော့သေပါလိမ့်မယ်။တန်ဆေးလွန်ဘေးပါ) ၄။ ။Vodkaဆိုတဲ့အရက်တစ်မျိုးကတော့စိတ်ဖိဆီးမှု့ဒဏ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ ၅။ ။Vermouthဆိုတဲ့အရက်ကတော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေပါတယ်။၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်လား၊H1N1လားမကူးစက်ချင်ရင်တော့Vermouthဆိုတဲ့အရက်လေးကိုမှီဝဲသင့်ပါတယ်။ ၆။ ။GINဆိုတာကတော့မကြာခဏရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကြားဘူးမှာပါနော်။သူကဖျားနာခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ၇။ ။RUMဆိုတဲ့အရက်ကတော့ နာကျင်မှု့ဝေဒနာတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမတော်တဆထိခိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နေမကောင်းဖြစ်ချင်နေလို့အသားတွေနာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်RUMဆိုတဲ့အရက်ကတော့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၈။ ။Brandyဆိုတဲ့အရက်ကတော့အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။(မအိုဆေးဆိုတာဒါလားပဲမသိဘူးနော်) ၉။ ။Beerကတော့အရိုးတွေကိုသန်မာစေပါတယ်တဲ့(အရိုးပွရောဂါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်) ၁၀။ ။Wineကတော့ကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။(အမျိုးသမီးတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဖြစ်လိုက်ရင်သူတို့ချည်းပဲကိုး :D) ၁၁။ ။ARAKဆိုတဲ့အရက်အမျိုးအစားကတော့သွေးလည်ပတ်အားကောင်းသလိုသုတ်ပိုးကိုလည်းတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။(ချိဖတို့သဘောကျနေပြီမလား) ၁၂။ ။Cognacကတော့ကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
လောကီပညာကို လိုက်စားကြသော မြန်မာဆရာများ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာဆရာအချင်းချင်း ပညာကို ဖလှယ်သော အလေ့အထ ရှိတတ်ကြ၏။ထိုသို့ တစ်ဦးအား ပေးအပ်ကာ လဲလှယ်ကြရာ၌ ရှေးဦးစွာ`မိမိရှာဖွေတတ်သိထားသမျှ ပညာရပ်များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ကိုယ်တွေ့မှန်ကန်သော ပညာများကိုသာပေးပါမည်။မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ ပေးခဲ့မိလျှင် ယခုတတ်ထားသမျှပညာများလည်း ပျက်ကွက်၍ မဟာအ၀ီစိငရဲ၌ မကျွတ်တန်းခံရပါစေ`ဟု ဆရာနှစ်ဦးစလုံး သစ္စာပြုပြီးမှကို ပညာဖလှယ်ကြလေ့ရှိပါသည်။ ယခုဖော်ပြလိုက်သောနည်းမှာ ၁၂၉၄ခုနှစ်လောက်က ပဲခူးမြို့သို့ရောက်စဉ် ယုံကြည်လောက်သော ပယောဂဆရာတစ်ဦးနှင့် စာရေးသူတို့ ပညာချင်းဖလှယ်ကြရာမှ ရရှိခဲ့သောနည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဥုံ – ရှင်သီဝလိ ဘုန်းရှိမြတ်စွာ ရဟန္တာထိပ်မှာမြတ်ဖျား Read more